Isexwayiso sikaShenge kubaholi be-IFP komasipala - Ilanga News
Home Izindaba Isexwayiso sikaShenge kubaholi be-IFP komasipala
Isexwayiso sikaShenge kubaholi be-IFP komasipala
Kuvulwe nezakhiwo ezizohlomulisa abantu abawu-52
UMNTWANA waKwaPhindangene iNkosi uMangosuthu Buthelezi nemeya yaseNkandla uMnu Thamsanqa Ntuli bevula indlu eyakhelwe umndeni
wakwaLanga obuxakekile.IZITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE
UHLABE abaholi abazi-khukhumezayo bakho-hlwe wukusebenzela abantu uMntwana wa-KwaPhindangene iNkosi Mangosuthu Buthele-zi ngesikhathi exwayisa ubuholi baleli qembu obuphethe imikhandlu yomasipala ngethikithi lale nhlangano ngo-bubi bokuzitshela.
Lokhu ukusho ngoMgqibelo eNka-ndla eyovula ngokusemthethweni indlu enamagumbi amane eyakhelwe umndeni wakwaLanga, endaweni ya-seSibhudeni njengoba uNkk Zithulile Langa ohlala khona edonsa kanzima.
UNkk Langa wawelwa yindlu ahlala kuyona nabazukulu bakhe abanga-phezulu kweshumi, ephakathi. INko-si uButhelezi ithi nakuba abantu benga-kuqapheli ukuthi ukwakhiwa kwezi-ndlu kuwumsebenzi kahulumeni omkhulu, hhayi owomasipala nemeya, kodwa lokhu okwenziwe wumasipala waseNkandla kuwukhululile umoya wakhe.
“Lo mndeni bewungeke ukwazi ukulindela uhulumeni wesifundazwe ngo-kwesimo sawo, ungazi kwakhona ukuthi uzoyithola yini indlu. Kayikho inke-ce enikwa umasipala eqondene nohlelo lokwakhiwa kwezindlu, ngiyazi ukuthi abantu kabakuqapheli lokho. Okwenziwe yimeya yaseNkandla ku-yancomeka. Ukusizana kuwumthwalo wethu sonke.
“Imiphakathi eminingi iphila ngemali kadekle, yingakho kubalulekile ukuba abantu abakhethwayo ebuholini bomasipala bakwazi ukunakekela umphakathi,” kusho iNkosi Buthelezi.
Uthi kuhlale kumkhuthaza ukudela konke akwenzayo avakashele eNka-ndla ngenxa yemisebenzi emhle eye-nziwa khona, elekelela izakhamizi.
Uphawule ngalokhu ngesikhathi esevula izindlu zokusebenzela eza-khelwe abadayisi baseNkandla, abathengisa erenke enkulu esedolobheni. Uthi lezi zakhiwo zikhuthaza abantu ukuze bakwazi ukuqhubeka nokuze-nzela okokuziphilisa, uyazincoma ka-khulu. Lezi zakhiwo kuthiwa zizohlo-mulisa abantu abawu-52 kanti zidle u-R1 million.
IMeya yaseNkandla uMnu Thamsa-nqa Ntuli, uthi usizi lwalo mndeni lu-wuthinte kakhulu umoya wakhe. Utshele ILANGA ukuthi isimo sawo uzwe ngaso komunye umsakazo wo-mphakathi kufona umlaleli ebika ukuthi kukhona ugogo ongahlezi kahle, isi-mo sibi. Uthi usuke ngaleso sikhathi wayofuna lo mndeni wawuphathela nokudliwayo wafika wasibona isimo. Uthi izindlu ebekade zikhona kulo mndeni zibhidlike zonke waze wathu-thwa wayohlaliswa ehholo lomphaka-thi.
UNkk Langa uvele wadinda isililo. Utshele ILANGA ukuthi lezi zintanda-ne asele nazo zashiywa yindodakazi yakhe nyakenye eyagwazwa eThekwini ihambe iyofuna amatoho. Uthi yashona kungakapheli ngisho izinyanga ezimbili iha-mbile.
“Kangikaze ngicabange ukuthi ngiyohlala endlini yalolu hlobo nezinga-ne zomntanami. UNkulunkulu noma usengangithatha umoya wami usuyokuthola ukuphumula ngoba ngizobe ngazi ukuthi izingane ngizishiye
endlini,” kusho uNkk Langa.
Abazukulu bakhe basafunda emabangeni ephansi. Umasipala uba
Previous articleU-Eto’o ufisela iChiefs inhlanhla kwiCaf
Next articleBachitha eyamafa ngobulawe nendodana